ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ: ဒေါ်လာ ၉၇ ဘီလီယံထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Your Brain On Porn
ညစ်ညမ်း: တစ် $ 97 ဘီလီယံအထိစက်မှုလုပ်ငန်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အာရုံကြောသက်ရောက်မှု (2018)
Bridie H ကို Peters
ရည်ရွယ်ပါသည်: ဤသုံးသပ်ချက်ကိုယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အပေါ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများရှာဖွေစူးစမ်းသုတေသနအနှစ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါဟာညစ်ညမ်းရဲ့စွဲလမ်းအလားအလာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်။
နည်းလမ်းများ: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းများ၏ကျန်းမာရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုရည်မှတ်သက်ဆိုင်ရာစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်များထိုကဲ့သို့သော PubMed နှင့် JSTOR အဖြစ် databases ကိုရင်းမြစ်ထားတဲ့ခဲ့ကြသည်။
ရလဒ်များ: ဤသုံးသပ်ချက်ကိုလက်တွေ့ရောဂါအဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတည်ပြုရန်, ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအလားအလာများအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်သေအထောက်အထားတွေ့။ ညစ်ညမ်းကိုလည်း misogynistic ယုံကြည်ချက်ပွုစုပြိုးထောယင်း၏အသုံးပြုသူများအများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်စေခြင်းနှင့်လိင်ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အချို့သောအခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။ ညံ့ဖျင်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းတဲ့ bi-directional အသင်းအဖွဲ့ရှိသည်ဖို့ပေါ်လာပါသည်။
ကောက်ချက်: ညစ်ညမ်း၏အလားအလာကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ရန်ရှိပါတယ်။ ဒီမီဒီယာများ၏နေရာအနှံ့သဘာဝပေးထားသောဤတွေ့ရှိချက်များအဘို့အသိသာလက်တွေ့သက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
အင်တာနက်ပေါ်တွင်၏ပြန့်ပွားသည့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးရိုင်း-မီးကြီးထွားတိုးပွားလာကြခဲ့သည်။  ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအားလုံးအင်တာနက်ရှာဖွေမှုများကိုအပေါင်းတို့နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ 1.5% ၏လေးပုံတပုံများအတွက်စာရင်းကိုင်, အရင်ကထက်ပိုပြီးလက်လှမ်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချိသည်။  သို့သော် , ဒီတိုးတက်မှုနှုန်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲလာမပေးပါဘူး။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုစိုက်ပျိုးခြင်း, misogyny နှင့်ဆင်းရဲသောစိတ်ကျန်းမာရေးဒီစက်မှုလုပ်ငန်းဆန့်ကျင်လုပ်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်စွပ်စွဲချက်အချို့အကြားရှိပါတယ်။ [1,3,4] သြစတြေးလျယောက်ျား၏ 84% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 23% 16-25 နှစ်ပေါင်းအသက်ကြောင်းအားဤအစွပ်စွဲချက်ရေကြည်လျှင်  သူတို့သိသာနှင့်ကျယ်ပြန့်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ကဒီမီဒီယာကိုသုံးပါ။ အောက်ပါပြန်လည်သုံးသပ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများအပေါ်သုတေသနပြုအနှစ်ချုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငြင်းခုန် (ဥပမာအရက်, compulsive လောင်းကစားဝိုင်း) ကအခြားစွဲရောဂါရှိသူများမှနှိုင်းယှဉ်သည်ဖြစ်စေ, ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းအလားအလာရှိပါတယ်ရှိမရှိနှင့်ကမပါလျှင်ကဲ့သို့ရှိ၏။  ဤကောင်းမွန်စွာထူထောင်စွဲရောဂါအများအပြားဘုံအတွေးနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပုံစံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားများပါဝင်သည်ပေမယ့်ကန့်သတ်မဟုတျပါ: အလွဲသုံးစားမှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာ / object ကိုထိန်းချုပ်၏ (က) ရိပ်မိမရှိခြင်း, (ခ) မှဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာကြားဆက်ဆံရေး, လူမှုရေး, အလုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းပြဿနာများ) ကိုအသုံးပြုလျက်ရှိ၏ (ဂ) ဤအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်း၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့တစ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, ။  ဤရောဂါလက္ခဏာများပိုမိုညစ်ညမ်းသုံးရင်၏တိုင်ကြားတဲ့သူလူနာများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်လျက်ရှိသည်အလွဲသုံးစားမှု၏ပစ္စည်းဥစ္စာ / အရာဝတ္ထုနှင့် (ဃ) အတွက်အဆက်မပြတ်။ 
ညစ်ညမ်းစွဲပစ္စုပ္ပန်မှာ DSM-V ကိုသို့မဟုတ် ICD-10 အတွက်တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်တွေ့ရောဂါ, သို့သော်ဤတွေ့ရှိချက်များ၏ပျံ့နှံ့နေတဲ့အလုပ်လုပ်လက်တွေ့ရောဂါအဖြစ် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်း၏ကျယ်ပြန့်သုံးစွဲခြင်းမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်မပေးပါ။ ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောလေ့လာမှုအတော်များများလူနာကဒီရောဂါရှိသည်ဖို့သံသယစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဲဒီမှာဒီရောဂါ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုမသဘောတူညီမှုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တခြားစှဲနှင့်အတူသကဲ့သို့, ဖျောပွအတွေးပုံစံများ  ဝိသေသဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးလက်တွေ့ရောဂါကဤရောဂါလက္ခဏာအချို့လူဦးရေအတွက်မြင့်မားသောလိင် drive ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးရောဂါဗေဒစွဲရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များမဟုတ်သောအတွေးဖြစ်သကဲ့သို့ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်။  ကြောင့်ဒီဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်ရေပန်းစားအငြင်းအခုံ, သုတေသီများဆွဲရန်ကြိုးစားခဲ့ကြ သံသယ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်အတူရှိသူများနှင့်ရောဂါပိုကောင်းသတ်မှတ်နှင့်ထူထောင်သည်အဘယ်မှာရှိတ္ထုများမှစွဲရှိသူများအကြားတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ် (ဥပမာအရက်) ။ တစ်ဦးဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏ထူးခြားချက်တစ်ခုက၎င်း၏အသုံးပြုမှုကနေအချိုးကျအပျော်အပါးမရှိဘဲပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုတိုးလာလိုရှိ၏။  fMRI neuroimaging တွင်ဦးနှောက်ကိုယင်း၏သက်ရောက်မှုမှဒဏ်ခံဖြစ်လာအဖြစ် dopamine မှ striatal တုန့်ပြန်လျော့နည်းသွားအတိုင်းဤမြင်နိုင်ပါသည်။ [9 ] အလွန်ဆင်တူတွေ့ရှိချက်သံသယညစ်ညမ်းစွဲနှင့်အတူလူနာမှာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ လက်ျာ caudate အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သူများအတွက် putamen activation မှေးမှိန်နေသည်ပာုကဒီမီဒီယာအဘို့မိမိတို့အလိုဆန္ဒဝေး  သူတို့အပေါ်မှာကရှိပါတယ်ကာမဂုဏ်ကိုခဏသက်ရောက်မှုကိုကျော်လွန် fMRI အပြောင်းအလဲများကတခြားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူလူနာအတွက်သူများနှင့်ဆင်တူနေသည်။  လေ့လာရေးတွေ့ပြီ သူကိုလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုပါ။  ဤလူနာလည်းညစ်ညမ်းနေတဲ့သည်းခံစိတ်ဖွံ့ဖြိုးနိုငျသောသီအိုရီကိုထောက်ပံ့ပေးသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်ရှိသည်ဖို့များပါတယ်။ 
ဤအတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမြင်သာထင်သာတန်ပြန်လျှော့ striatal အသံအတိုးအကျယ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်မဟုတ်တိုးပွားလာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်။  ဒီမော်ဒယ်သဘာဝကျကျလျှော့ချ striatal အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူလူ dopaminergic တုံ့ပြန်မှုတွေအတွက်အပိုဆောင်းလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ကြောင်းစောဒကတက်သည်။ သူတို့ဟာထို့ကြောင့်ညစ်ညမ်းပမာဏကိုစားသုံးဖို့ပိုများပါတယ်။ ဒီ model နှင့်အတူရှိသူများ striatal အသံအတိုးအကျယ်ပြုလုပ်ပိုမိုလိုအပ်လျှင်ပင်, ညစ်ညမ်း၏အပြည့်အဝပျြောမှေ့စအကျိုးသက်ရောက်မှုများအောင်မြင်ရန်နိုင်ဖြစ်သင့်လျော့နည်းသွားသည်။  သို့သော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားကဒီမျှော်လင့်ထားသည့်အပြုသဘောထိုး-အကျိုးသက်ရောက်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိမထင်ထားဘူး အပျော်အပါး။  ထို့အပြင်ဓာတ်ခွဲခန်း fMRI လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများကြည့်ရှုဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုချ-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။  ဤညစ်ညမ်းချ-ထိန်းညှိသည့် striatum အတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ်အကြံပြုထားသည်။ ဒီတွေ့ရှိချက်၏ဆေးထိုး-တုံ့ပြန်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးမရှိသေးပါထူထောင်ခံရဖို့ဖြစ်ပြီး, ဤတွေ့ရှိချက်က high-အသံအတိုးအကျယ်အသုံးပြုသူများသည်သို့မဟုတ်စွဲအခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူသူတို့အားသီးသန့်ရှိမရှိမသိရသေးနေဆဲဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်ဖန်ဆင်းနောက်ထပ်တာဝန်ခံအထူးသဖြင့်ယောက်ျားအတွက်, misogynistic သဘောထားများနှင့်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်အပေါ် 135 လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်မှာ, ညစ်ညမ်းပါဝင်သည်ခဲ့သော၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ, တိုက်ရိုက် "လိင်အရအခွင့်အရေးယုံကြည်ချက် ... နှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု သာ. ကြီးမြတ်သည်းခံစိတ်" အမျိုးသားများအတွက်နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။  ဒီမီဒီယာအမျိုးသမီးနှောင့်ယှက်ဆီသို့အမျိုးသမီး objectification, ကြီးစိုးအယူဝါဒနှင့်အလိုလိုကျကိုထောက်ပံ့သောအမြင်များကိုမှေးမွူတစ်ကဏ္ဍမှပါလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းအစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (1-12 နှစ်) စဉ်အတွင်းဝင်ရောက်ချိန်တွင်  ဒီအသင်းအဖွဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးပါပဲ။  ဒီဧရိယာထဲမှာ longitudinal သုတေသနကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုအဖြစ်ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုရိုးရှင်းစွာသောဤအမြင်များနှင့်အတူလူညစ်ညမ်းပိုမိုပမာဏကိုစားသုံးကြောင်းအကြံပြုစေခြင်းငှါ, ချို့တဲ့နေပါတယ်။ ညစ်ညမ်းလိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားတွေမြှင့်တင်ရန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဖို့ပါလျှင်ထို့အပြင်, သောဤထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအခြားသူများနှင့်အတူ interaction ကသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အပေါ်ကိုသွားအတိုင်းအတာဆုံးဖြတ်ရန်မသိရသေးနှင့်ခက်ခဲသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအပေါ်ညစ်ညမ်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတည်ထောင်ရန်ကြိုးပမ်းအဆိုပါသုတေသနအလွန်အမင်းဝိရောဓိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကပျံ့နှံ့နေတဲ့အတွေးက၎င်း၏ပစ္စည်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အကြမ်းဖက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကျူးလွန်ရန်သူတို့၏ propensity တိုးမြှင့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမှကြည့်ရှု desensitises သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။  ဒီမြင်ကွင်းကို porn ယောက်ျားအတွက်မုဒိမ်းမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏လက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ဟုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံသည်။ [3,18] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအပေါ်ဒီသြဇာကိုလိင်ရန်လိုသည့်အပြုအမူအခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူယောက်ျားမှအကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ဖြစ်ကောင်းန့်အသတ်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။  ဤပါဝင်သည်။ မိသားစုအကြမ်းဖက်မှုများ၏သမိုင်း, အထီးကြီးစိုးနှင့်ခိုင်မာခြင်းမြှင့်တင်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကြီးပြင်း, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လိင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောအမြင်များ၏လက်ခံသဘောထားတွေ  ဤအမြင့်မားသောစွန့်စားမှုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုတစ်ခုတိုးလာပျံ့နှံ့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် အင်္ဂါဇာတ်, ပါးစပ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိုးဖောက်မှု, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့လိင်ပြင်းထန်တဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့လိင်အတင်းအဓမ္မ  ဒီသုတေသနညစ်ညမ်းများအတွက် cathartic အခန်းကဏ္ဍ၏အငြင်းအခုံစိန်ခေါ် - ။ ဤအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulses သတင်းပို့အတန်ငယ်ဖြစ်သကဲ့သို့၎င်း၏အသုံးပြုမှုယောက်ျားအတွက်ကျူးလွန်ခဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ၏ပျံ့နှံ့မှုလျှော့ချနိုင်သော ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှတဆင့်အပေါ်သို့ခဲ့သညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးမြှင့်တင်ထဲမှာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအတှကျအခွားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူလူအတွက်ကောင်းမွန်စွာထူထောင်သို့သော်အများဆုံးအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ညစ်ညမ်းနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးအကြားကြောင်းကျိုးဆက်စပ် link ကိုလျော့နည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ထူထောင်သည်နှင့်မြင့်မားအခြေအတင်ဆွေးနွေးသည်။  ထို့ကြောင့်, ညစ်ညမ်းမုဒိမ်းမှုမိန်းမတို့အားလူတခြို့ predispose ကြောင်းသဘောထားမြှင့်တင်ရေးနှင့်အတည်ပြုရန်အတွက်အခန်းကဏ္ဍစခွေငျးငှါ, သို့သော်, ကလိင်ကရန်လိုသည့်အပြုအမူများအတွက်အဘယ်သူမျှမကအခြားအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူယောက်ျားမသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိနိုင်ပါသည်။  ဒီသို့သုတေသနပြုဖို့အများကြီးအတားအဆီးရှိပါတယ် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမဟုတ်ဘဲအနည်းဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေး၏ underreporting နှင့်ဤမီဒီယာများ၏နေရာအနှံ့သဘောသဘာဝ။
ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေး၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့  ။ အရှိဆုံးအမျိုးသားများတွင်လိင်ဆက်ဆံမှုရန်လိုသည့်အပြုအမူမြှင့်တင်ရန်အတွက်ကန့်သတ်အခန်းကဏ္ဍများညစ်ညမ်း, လိင်စိတ်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်အတွက်ကျယ်ပြန့်များမှာလျှော့ချစေခြင်းငှါနေစဉ်, တခါအပတ်စဉ်အနိမ့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ထက်ပိုမိုညစ်ညမ်းကိုလောင်သောသူတို့၏အမျိုးအ 16% မသောသူတို့၏အမျိုးအ 0% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, ။  ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများအခက်အခဲ orgasming ပါဝင်သည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရငျးနှီးနည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ကျော်ညစ်ညမ်းများအတွက် preference ကို၏ခံစားလျော့နည်းသွားသည်။ က c  Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်အခါပစ္စုပ္ပန်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒလှုံ့ဆော်ဖို့ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမကြာခဏရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်း sexually ဖို့မရင်းနှီးသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ပေမယ့်။  အထီးဖွယ်ရှိတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်ဤတွေ့ရှိချက်များအဘို့အကောင့်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုရပ်စဲမြောက်မြားစွာအကောင့်ပေါ်မှာလည်းဒီအခြေအနေတစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍပါဘူးအကြံပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလူနာတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ကုသမှုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့သည်။ [24,25] တစ်ခုမှာ longitudinal လေ့လာမှုလည်းညစ်ညမ်းပါသည်တစ်ဦးကစာရင်းအင်းသိသိသာသာရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ဆင်းရဲသောသူသည်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကိုခန့်မှန်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ ညစ်ညမ်းပါသည်အိမ်ထောင်ရေးမကျေနပ်မှု၏ထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောမကျေနပ်မှုများအတွက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်ဖြစ်မသာရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာမီဒီယာလေ့လာမှု၏ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာသာအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကိုအောက်ပါ, လေ့လာမှုမှာဆငျးရဲသောအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကို၏ဒုတိယအကြီးမြတ်ဆုံးခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းတွေနဲ့တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သာမယားကိုညစ်ညမ်းသုံးပါနှင့်မသူကိုခင်ပွန်း၏လျှောက်ထားပုံရသည်။ 
စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တိုးပွားလာအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု beingheavily သုတေသနပြုသည်။ ညစ်ညမ်းပါသည်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း, အထီးကျန်ဆင်းရဲ Self-လေးစားမှုနှင့်ဘဝ၏လျော့ချအရည်အသွေးကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ [5,27,28,29] 914 မြီးကောင်ပေါက်များ၏သြစတြေးလျလေ့လာမှုကနောက်ဆုံး6လအတွင်းစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုသတင်းပို့သောသူတို့အားအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်အပတ်စဉ်မသောသူထက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ 52% ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ကြ၏။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့  တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလည်းဖြစ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အော့ဖ်လိုင်းဘဝနှင့်ဆင်းရဲသောလူမှုရေးအထောက်အပံ့ခံစားချက်တွေကိုအတွက်မကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်။  ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံဒီဆက်ဆံရေးအတွက်တစ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍနိုငျသျောလညျးအညီအမျှပါကမြီးကောင်ပေါက်အထီးကျန်ခံစားချက်တွေကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဆက်ဆံရေး၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်သဘာဝစူးစမ်းခြင်း, ယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ညစ်ညမ်းစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထိတွေ့စိတ်ကျရောဂါနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌အနိမ့် Self-လေးစားမှုများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  အခြားတစ်ဖက်တွင်, တစ်ဦး longitudinal လေ့လာမှုလည်းရှိပါတယ် ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါခံစားခကျြကိုအနိမ့် compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ညစ်ညမ်းတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအားပေးရာမှအဆိုပါအတိုင်းအတာမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမီဒီယာများ၏တိုးပွားလာနေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရလုပ်ဆောင်သွားရန်ဤမြေကွက်၌ထိန်းချုပ်ထား longitudinal စမ်းသပ်မှုတွေခက်ခဲစေသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းနှင့်အတူလူနာအတွက်ညစ်ညမ်းချုပ်ရာ၏ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေစူးစမ်းအပိုဆောင်းသုတေသနအကြီးအလက်တွေ့အကျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။
ညစ်ညမ်းများ၏ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုရှာဖွေစူးစမ်းသုတေသနအများကြီးရှိနေဆဲအပြီးအပြတ်ကောက်ပေမယ့်, ဒီမီဒီယာပတျဝနျးကငျြသိသိသာသာများနှင့်ရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်နေဆဲရှိသေး၏။ ဤကွက်လပ်သည်အလွန်နောက်ထပ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများအထက်ဖြေရှင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်ညစ်ညမ်း၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အခန်းကဏ္ဍရှင်းလင်းပေးသောအပိုဆောင်း longitudinal လေ့လာမှုများမှအကျိုးလိမ့်မယ်။ ဒီမီဒီယာများ၏တီထွင်ခဲ့တယ်အသုံးပြုမှုကိုကဒီလယ်ပြင်၌ထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုများရန်အတားအဆီးအဖြစ်အစေခံ, ဒါပေမယ့်လည်းထိုကဲ့သို့သောတွေ့ရှိချက်ရှိစေခြင်းငှါ၎င်းကျယ်ပြန့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုပေးထားနောက်ထပ်သုတေသနဘို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးပေးထားဘူး။ ထို့အပြင်ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအင်တာနက်များ၏ပြန့်ပွားနှင့်အတူသိသိသာသာဤရာစုအသွင်ပြောင်းခဲ့ပါသည်, ဤအပြည့်အဝသက်ရောက်မှုသေးသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Koshy မMatthewဲ & တိ Hanna ။
၁။ Owen E, Behun R, Manning J, Reid R. အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေများ၏ဆယ်ကျော်သက်များအပေါ်သက်ရောက်မှု - သုတေသနပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း 1; 2012 (19-1): 2-99 ။
2 ။ လူငယျမြား၏ Papadopoulos အယ်လ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ [အငျတာနကျ] ။ မူလစာမျက်နှာရုံး; 2010 စ။ 45 ။ http: // webarchive ထံမှရရှိနိုင်။ nationalarchives.gov.uk/20100408115835/http://www ။ homeoffice.gov.uk/documents/Sexualisation-young-people.html
3 ။ Allen က M ကို, Emmers T က, Gebhardt L ကို, မုဒိမ်းဒဏ္ဍာရီများ၏ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်လက်ခံနိုင်ရန် Giery အမ် Exposure ။ ဆက်သွယ်ရေးဂျာနယ်။ 1995; 45 (1): 5-26 ။
4 ။ ရက်ကန်း J ကို, ရက်ကန်း S က, Mays: D, Hopkins, G, Kannenberg W က,
5 ။ Lim က M ကို, Agius P ကို, Carrotte အီး, Vella တစ်ဦးက, Hellard အမ် Young က
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်အတူညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏သြစတြေးလျ '' အသုံးပြုမှု
6 ။ T က, Laier ကို C, အမှတ်တံဆိပ် M က, Hatch က L ၏ Hajela R. အာရုံကြောသိပ္ပံ Love
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ: တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို။ အမူအကျင့်
7 ။ Doornwaard S က, ဗန်တွင်း Eijnden R ကို, Baams L ကို, Vanwesenbeeck
ငါ Ter Bogt တီအောက်ပိုင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အကျိုးစီးပွားလိင်အကဲဆတ်၏ compulsive အသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုခန့်မှန်း
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys များထဲတွင်အင်တာနက်ကိုပစ္စည်း။ လူငယ်၏ဂျာနယ်နှင့်
8 ။ ဒါဝိဒ်သည်အယ်လ် Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက် - ဒါဟာစှဲ [အငျတာနကျ] မဟုတ်ပါပါပဲ။
စိတ်ပညာယနေ့တွင်။ 2013 [27 သြဂုတ်လ 2018 ကိုးကား] ။ : ကနေရရှိနိုင်
201307 / သင့်-ဦးနှောက်-porn-ယင်း၏--စွဲလမ်းမဟုတ်
9 ။ Allen က M ကို, Emmers T က, Gebhardt L ကို, Giery အမ် Exposure
10 ။ Voon V ကို, မှဲ့ T က, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့
et al ။ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမရှိဘဲ။ PLoS ONE ။
2014;9(7): e102419 ။
11 ။ Volkow N ကို, Koob, G, McLellan အေ Neurobiologic တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ
12 ။ Kühn S က, Gallinat ဂျေဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Functional
စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 71 (7): 827 ။
13 ။ အပြုအမူစွဲအပေါ် 4th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ
ဖေဖော်ဝါရီလ 20-22, 2017 ဟိုင်ဖာ, ဣသရေလ။ အပြုအမူစွဲ၏ဂျာနယ်။
14 ။ BANCA P ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့, Harrison N ကို, Potenza M က, Voon
V. ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။
စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်။ 2016; 72: 91-101 ။
15 ။ ရပ်ကွက်အယ်လ်မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: အင်ပါယာ၏ပြည်နယ်
သုတေသန 1995-2015 ။ လိင်သုတေသနများ၏ဂျာနယ်။ 2016; 53 (4-
5): 560-577 ။
16 ။ ဘရောင်း J ကို, သည် L'Engle K. X-အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်အပြုအမူ
လိင်အမေရိကန်အစောပိုင်းပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' Exposure နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့
အကဲဆတ်သောမီဒီယာ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့် Neurology ၏ဂျာနယ်။
17 ။ လိင်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ Porn အကြားတွင်အဆိုပါရည်မှတ်ကော်နက်ရှင်
[အငျတာနကျ] ။ သစ်မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်။ 2018 [29 ဇွန်လ 2018 ကိုးကား] ။ ရရှိနိုင်
18 ။ သြစတြေးလျရေကြီးအမ်လူငယ်နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ [အငျတာနကျ] ။
ကင်ဘာရာ: အဆိုပါသြစတြေးလျအင်စတီကျု, 2003 ။ https: // ကနေရရှိနိုင်
19. Malamuth, N. , & Huppin, အမ် (2005) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်
ဆယ်ကျော်သက်: တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်များ၏အရေးပါမှု။ အပြိုမ
ဆေးပညာ, 16, 315-326 ။
20 ။ ဖာဂူဆန်ကို C, Hartley R. အဆိုပါအပျော်အပါးဒင်္ဖြစ်ပါတယ် ...
damnable ကုန်ကျစရိတ် ?. ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်အပြုအမူ။
21 ။ ပန်းခြံ B, Wilson က, G, Berger J ကို, Christman M က, Reina B က, ဆရာတော်က F et
အယ်လ်။ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်စေသလဲ? တစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
လက်တွေ့အစီရင်ခံစာများအတူ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2016;6(3): 17 ။
22 ။ Pizzol: D, Bertoldo တစ်ဦးက, Foresta C. ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ် porn:
နှင့်ကျန်းမာရေး။ 2015;0(0) ။
23 ။ ပန်းခြံ B, Wilson က, G, Berger J ကို, Christman M က, Reina B က, ဆရာတော်က F et
24 ။ ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါက Doidge N. အဆိုပါဦးနှောက်: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၏ပုံပြင်များ
ဦးနှောက်သိပ္ပံ၏ Fontiers ကနေအောင်ပွဲ။ 1st ed ။ နယူးယောက်:
ပင်ဂွင်းစာအုပ်များ; 2007 ။
25 ။ ပေါ်တို R. Habitudes masturbatoires et dysfonctions sexuelles
26 ။ ပယ်ရီအက်စ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး Reduce ကိုကြည့်ရှုခြင်းလော
အချိန်ပို? longitudinal ဒေတာများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ လိင်၏မော်ကွန်း
27 ။ Leppink အီး, ချိန်ဘာလိန်က S, လာခြင်းက S, Grant ကဂျေပြဿနာ
အမူအကျင့်များနှင့် neurocognitive variable တွေကို။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။
2016; 246: 230-235 ။
28 ။ Yoder V ကို, Virden T က, အီဒီအာမင် K. အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်
အထီးကျန်ခြင်း - အသင်းတစ်ခုလား။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း
29 ။ Boies S က, Cooper ကတစ်ဦး, အင်တာနက်-Related အတွက် Osborne C. အပြောင်းအလဲတွေဟာ
ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ။ 2004;7(2): 207-230 ။
30 ။ အွန်လိုင်းမှ Exposure အကြား ma C. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
longitudinal လေ့လာပါ။ ဘဝ၏အရည်အသွေးအတွက်အသုံးချသုတေသန။ 2018 ;.
31 ။ Doornwaard S က, ဗန်တွင်း Eijnden R ကို, Baams L ကို, Vanwesenbeeck